“Weli waxaan ku jirnaa bisha Sebtember, hadda ha dabaal dagina” – Guardiola oo fariin u diray Liverpool – Gool FM
(Manchester) 15 Sebt 2019.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa si qoto dheer uga hadlay qaabka layaabka leh ay Liverpool hogaanka ugu qabatay horyaalka Premier League, xilliyadii lasoo dhaafay.
Manchester City ayaa guuldarro naxdin leh kala soo kulantay Norwich City oo ay amrti u noqotay, kaddib markii looga adkaaday 3-2.
Kooxda difaacaneysa Premier League ee Manchester City ayaa ku jirta kaalinta labaad, waxayna 5 dhibcood ka hooseeysaa Liverpool oo fiida sare ee hogaanka ku fadhisa, kaddib 5 kulan ee ilaa iyo haatan laga ciyaaray xilli ciyaareedkan horyaalka.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay Pep Guardiola, kaddib guuldaradii Norwich City wuxuuna yiri:
“Shan dhibcood ayaan ka dambeynaa Liverpool, laakiin wali waxaan ku jirnaa bisha Sebtember”.
“Miyaan u hambalyeynaa Liverpool, oo ma waxaan dhahnaa hambalyo waxaad tihiin kooxda horyaalka, anagoo wali ku jirna bisha Sebtember?”.
Pep Guardiola ayaa iska diiday inuu dhaleeceeyo difaaciisa Nicolás Otamendi, kaddib markii uu sabab u noqday goolashii ka dhashay City kulankii xalay ee Norwich City, wuxuuna yiri:
“Otamendi ma uusan ogeyn in mid ka mid ah ciyaartooyda uu gadaal kaga imaanayo oo cidina uma aysan sheegin siaga”.
“Mararka qaar waad ogtahay inaad khala sameysay, laakiin waxaan u maleynayaa in mararka qaar aan iska ilowno in ciyaartoyda ay bini’aadam yihiin”.